Ọ na -agụsi Tanzania agụụ ike ịhụ mmalite nke ihe ngosi njem nlegharị anya mpaghara
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ » Ọ na -agụsi Tanzania agụụ ike ịhụ mmalite nke ihe ngosi njem nlegharị anya mpaghara
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • nzukọ • News • Akụkọ na -agbasa na Tanzania • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Tanzania dị njikere maka ihe ngosi njem nlegharị anya mpaghara EAC
Ihe ngosi njem nlegharị anya mpaghara mbụ na nke mbụ maka mba isii so na East African Community (EAC) ga -eme n'isi mbido Ọktoba. Emepụtara ya iji dọta ụlọ ọrụ ndị njem na ndị na -eme iwu n'ofe mpaghara.
Edere ya dị ka Expo njem nlegharị anya mpaghara mpaghara Afrịka (EARTE) 2021, a na -ahazi ihe ngosi ahụ site na Ọktọba 9 ruo 16.
Ihe omume a adọtala ndị isi njem nlegharị anya sitere na mba ndị otu EAC.
EARTE 2021 bụ ngosipụta njem nlegharị anya mpaghara nke mbụ ga -ewere ọnọdụ na East Africa, na -ezube iwulite mmemme jikọrọ aka nke ga -ejikọ mba 6 ndị otu iji mepụta atụmatụ njem mpaghara.
Ndị sonyere na EARTE gụnyere ndị na -azụ ahịa na mgbasa ozi mba ofesi ga -esonye na ikpughe ebe nlegharị anya bara ụba dị na East Africa na steeti ọ bụla.
Ihe ngosi a ga -esochi njem nlegharị anya maka ndị na -azụ ahịa na mgbasa ozi mba ofesi gaa ụfọdụ saịtị ndị njem nlegharị anya na Tanzania na EAC gụnyere oke osimiri Indian na ọdọ mmiri, anụ ọhịa, ịma mma mara mma, saịtị akụkọ ihe mere eme, na ihe nketa ọdịbendị bara ụba.
Isiokwu nke ihe ngosi na-abịanụ bụ "Nkwalite njem nlegharị anya maka mmepe mmekọrịta ọha na ụba." Emebela isiokwu ahụ iji kọwaa mkpa ọ dị ịzụlite na ịtụgharị mpaghara njem nlegharị anya n'ụzọ na-adigide iji belata mmetụta na mpaghara COVID-19 na-efe efe.
Mpaghara EAC tụfuru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 70 nke ndị bịara njem nlegharị anya mba ụwa na 2020, yana nnukwu mfu na ego ndị njem na ọrụ metụtara njem, kwuru. EAC Onye odeakwụkwọ ukwu, Peter Mathuki. Nchekwa anụ ọhịa na mpaghara ahụ nwere nnukwu nsogbu site na ọrịa na -efe efe site na mfu ego nchekwa, nke na -esitekarị na ndị njem nleta na -eleta mpaghara echekwara yana nchekwa anụ ọhịa n'ofe mpaghara ahụ.
Akụkụ njem nlegharị anya bụ otu akụkụ kacha mkpa maka imekọ ihe ọnụ maka EAC, n'ihi ntinye aka ya na akụnụba nke mba ibe ya n'ihe gbasara GDP (ihe dị ka 10%), ego mbupụ (17%), na ọrụ (ihe dị ka 7%). ). Mmetụta ya na njikọta ya na mpaghara ndị ọzọ na -enyere aka na njikọta ya dịka ọrụ ugbo, ụgbọ njem, na imepụta ya dị oke ukwuu.
Nkeji edemede 115 nke Nkwekọrịta EAC na -enye nkwado na mpaghara njem, ebe mba ndị mmekọ na -emebe imepụta ụzọ mkpokọta na ịhazi maka ịkwalite na ire ahịa njem dị mma n'ime na n'ime obodo.
Karịsịa, ha na -ebido ịhazi amụma na ụlọ ọrụ njem, na -ahazi nhazi ụlọ nkwari akụ, wee mepụta atụmatụ mpaghara maka ịkwalite njem nlegharị anya, nke ihe omume mpaghara na -eme ka mbọ onye ọ bụla sie ike.
Mba ndị otu EAC na -akwalite njem nlegharị anya mpaghara na mmemme njem nlegharị anya mba ụwa, gụnyere Market Travel World (London) na International Tourism Bourse (ITB) na Berlin.
Mgbe ahụ, mba ndị mmekọ ga -akwado ihe ngosi njem nlegharị anya mpaghara.
N'oge nzukọ pụrụ iche nke emere na Julaị 15, 2021, Kọmitii ngalaba EAC na njem nlegharị anya na njikwa anụ ọhịa kpebiri na United Republic of Tanzania kwesịrị ịnabata 1st EAC Regional Tourism EXPO na Arusha na Ọktoba 2021. Emere nhọrọ nke Arusha - ebe nlegharị anya njem nlegharị anya na obodo safari nke Tanzania - iji mee ka ohere isonye ndị sonyere si na Steeti Ndị Mmekọ niile dịrị.
Ebumnuche nke ihe ngosi ahụ bụ ịkwalite EAC ka ọ bụrụ otu njem nlegharị anya, wepụta ikpo okwu maka azụmaahịa ndị na -enye ọrụ njem na azụmahịa (B2B), ma mepụta mmata maka njem.
Ihe omume a ga-enwe ihe ngosi site n'aka ndị na-enye ọrụ njem, ịkparịta ụka ọsọ ọsọ na nzukọ B2B, yana nzukọ ọmụmụ ihe na njem nlegharị anya na isiokwu nke anụ ọhịa. N'ihe gbasara ngalaba njem, isiokwu ndị a ga-emetụta akụkụ dị ka nkwụsi ike njem na njikwa nsogbu, ịzụ ahịa njem dijitalụ, mmepe ngwugwu njem na-aga ebe dị iche iche, yana ohere itinye ego na njem mkpali.
N'aka nke ọzọ, isiokwu ndị metụtara anụ ọhịa ga-agụnye Ịlụ ọgụ na ịzụ ahịa anụ ọhịa na-ezighi ezi na uru akụ na ụba nke anụ ọhịa na mpaghara.
Nke kachasị mkpa, ihe ngosi ahụ ga-akwalite njem nlegharị anya mpaghara yana mgbakwunye njem mba ofesi site na ịkwalite onyinye ngwaahịa njem maka ụmụ amaala EAC. Nke a ga -ewuli elu na mbọ ndị gara aga dịka mkpebi ndị kansụl nke ndị minista na -eme na steeti ndị mmekọ na -enye ọnụego kacha mma maka ụmụ amaala na -eleta ebe ndị njem nlegharị anya n'ime mpaghara nwere ọnụego na -emetụta ndị mba.